'Halloween Inouraya' Inozoitwa Premiere muTheatre, paPeacock Zuva Rakafanana
musha Horror Varaidzo Nhau 'Halloween Inouraya' Inotangisa muTheatre, paPeacock Zuva Rimwe Chete
'Halloween Inouraya' Inotangisa muTheatre, paPeacock Zuva Rimwe Chete
by Waylon Jordan September 9, 2021 2,809 maonero
Nhau huru, Halloween Fans! Halloween Inouraya ichaita nzira yayo kuenda kuPeacock yekushambadzira network pazuva rimwe chete iro bhaisikopo rinoburitswa mumitambo. Nhau idzi dzakaiswa pane dzakasiyana siyana nzvimbo dzenhau nhasi nenyeredzi yemufirimu, Jamie lee machira, achitora pasocial media kuti aparadzire iye ega mashoko akanaka!
Idzi inhau huru, zviripachena. Nhamba dzehofisi yemabhokisi hadzisi izvo zvazvaive denda uye situdiyo dzichiri kukwikwidza kuti dziwane mafirimu avo pamberi pevazhinji vateveri sezvavanogona pasina kunyatso bhuroka mukuita. Iyo streamer inopa maviri ekunyorera ma tiers: $ 4.99 pamwedzi yekutarisa nezvishambadziro uye $ 9.99 pamwedzi kuenda isingashambadzi.
Halloween Inouraya inotora nguva mushure mekuguma kwe Halloween (2018). Laurie (Curtis) nemwanasikana wake (Judy Greer) uye muzukuru Allyson (Andi Matichak) vakapona nepaburi retsono imba-moto yavanofunga kuti vakateya Michael Myers. Sezvo Laurie achimhanyiswa kuchipatara kunorapa kukuvara kwakakomba kwaakaita panguva yekunetsana kwavo, mhondi yakafukidzwa inopunyuka pamoto uye inotanga kurova nzira ichidzoka kuburikidza neHaddonfield ichisangana nezviso zvakatonyanya kubva munguva yakapfuura.
Peacock uye Blumhouse / Universal zveshuwa, handiyo chete iyo yekuyedza neyekusunungura hwindo remahombe bhokisi hofisi mafirimu panguva yedenda. Warner Brothers vakaburitsa mafirimu mazhinji paHBO Max gore rino, uye vachazviita futi, mangwana, Gunyana 10, 2021, naJames Wan anotarisirwa zvikuru Anokuvadza.
Kumba kana mumitambo, isu tese takagadzirira kuona chitsauko chitsva mu Halloween saga uye makarenda edu anoratidzirwa nedenderedzwa hombe, reropa-dzvuku kutenderera October 15, 2021!